Translate Azerbaijani to Myanmar (Burmese) | Multilang.space
translate Azerbaijani to Myanmar (Burmese), Azerbaijani to Myanmar (Burmese) translations, Azerbaijani to Myanmar (Burmese) Google Translate ,
Salam necəsən မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား
Biri varmı? မည်သူမဆိုရှိပါသလား?
Mən səni çox sevirəm ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ
Bu hamburgerin dəyəri nə qədərdir? ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ,
Mənə taksi deyərsiniz? သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား?
Mən maraqlıyam ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို
Mənim uçuş təxirə salınıb အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ
İş üçün buradayam ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို
Salam mənim adım မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည်
Üzr istəyirik, amma evləndim ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို
Sizə soruşmaq istəyirəm ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ်
Məni hava limanına götürə bilərsənmi? သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား?
İndi vaxt nədir? ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ
Ən yaxın polis bölməsi haradadır? အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ?
Telefonunuzun şarj alətini ödəyə bilərəmmi? ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား?
Mənə kömək edə bilərsiniz? ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား?
Bir içki sifariş et, lütfen? ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ?
Bu neçəyədir? ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ?
Özüm üçün alerjiyəm ငါ gluten မှမတည့်ဘူး
Həkimə müraciət edin ဆရာဝန်ခေါ်ပါ
Həkim varmı? ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော
Zəng edə bilərəmmi? ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား?
Bana patronunuzu verin. ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။
Bura çox gözəl ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်
Məni otelə götürün ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ
Mənim otağım nədir? အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ?